Dhageyso Muxaadarada Al-walaa Wal-baraa Iyo Sheekh Abuu Salmaan. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Muxaadarada Al-walaa Wal-baraa Iyo Sheekh Abuu Salmaan.
November 18, 2016 7:34 am Views: 103
Webka Calamada waxa uu diin soo gudbinayaa mid ka mid ah muxaadarooyinka qayimka ah ee uu duubay sheekha caalimka ah ee Sheekh Xasaan Xuseen Abuu Salmaan.
Muxaadaradaan waxa uu cinwaankeedu yahay Al-walaa Walbaraa waxa uu sheekha ku faahfaahinayaan Mas’aladan waxey tahay iyo qofka Muslimka ah cidda la doonayo inuu walaha siiyo iyo cidda uu ka baraa’a qaadanayo.
Muxaadaran ma ahan mid cusub oo hadda uu jeediyay Sheekha balse waxaa ugu talagalnay in dadka Muslimiinta markale usoo gudbino Muxaadarada maadaaama ay ka hadleyso Mowduuc muhiim ah oo waqti walba taagan.
Sidoo kale sababta keentay in markale aan baahino Muxaadaraan waxey tahay hadda waxey Kufaarta iyo Murtadiinta wadaan qorshe dowlada Ridada federaalka loogu dhisayo madax iyo maamul cusub’iyadoona ay suura gal tahay in dadka shacabka Muslimka ah ku sirmaan doorashada oo ay taageera u muujiyaan Musharaxiinta Murtadiinta ah ee u taagan qabashada xilkaasi.
Halkan Ka Dhageyso Muxaadarada Al-walaa Wal-baraa.